Global Voices teny Malagasy » Rehefa Miteny Ny Praiminisitra Hoe Tsy Misy Vola intsony, Aleon’ny Rosiana ihomehezana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Aogositra 2016 7:27 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika (fr) i Suzanne Lehn, imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Akon'ny RuNet
”Atao tsinontsinona izahay”, hoy ilay vehivavy tamin'ny Praiminisitra.”8.000 robla [109 euros] ? Tsy misy dikany izany! ” Namorona ny hatsikana anisan'ireo malaza indrindra tamin'ny taona, namaly  i Medvedev: ”Tsy misy vola fotsiny tsotra izao. Hitady ny vola isika, ary avy eo hanitsy amin'ny laoniny ny fisotroan-dronono izahay. Atanjaho ny saina ! Mihazòna mafy ianareo ary kajio ny fahasalamana!”
Olona maro liana no mifaninana ankehitriny mba hanoratana  ireo singa tamin'izay nozarain'i Medvedev. Voatantara  fa nisy Rosiana iray mpahay lalàna ao St. Pétersbourg nametraka tao amin'ny Sampandraharah Federaly Rosiana misahana ny Fizakàmanana Ara-tsaina, na antsoina kokoa hoe ”Rospatent,” fangatahana fiantsoana napetraka ho an'ilay filamatra ”Mihazòna mafy!” Ilay mpahay lalàna, lehilahy antsoina hoe Viktor Pasternak, dia nihevitra fa afaka mivarotra ireo zony amin'nireo orinasa anatin'ny sehatra ara-bola sy ara-tsakafo. (Ny orinasa ”Apex Group” dia toa nametraka fangatahana tsy miaraka amin'io ho fanoratana ny filamatra ”Tsy misy vola fotsiny tsotra izao. Mihazòna mafy”.)
Ny vazivazy mikasika ireo teny mampalahelo nataon'i Atoa. Medvedev tany Krimea dia matetika mpitranga tao Rosia tato anatin'ny herinandro maromaro. Ny 9 Jona, ny mpandraharaha amin'ny fifandraisan-davitra Tele2 dia nandroaka  ilay Rosiana mpanao dokambarotra tao aminy izay namokatra afisy mampiasa ny tenin'i Medvedev ho amin'ny fampahafantarana ny Tele2. Niantso ny olona manerana an'i Masko ilay teny faneva: ”Ry mpifaninana, mihazòna mafy ianareo! Atanjaho ny saina ary kajio ny fahasalamana !” (Nifototra tamina fikarohana ofisialy vao haingana izay nametraka fa ny aterineto atolotr'ilay mpandraharaha amin'ny finday no haingam-pikoriana indrindra eo amin'ny tanàna ilay fanentanana tamin'ny dokambarotra.)
Ny faran'ny May, nizara hatsikana  teny amin'ireo kaontin'ny haino aman-jery sosialin'ny orinasa izay manala baraka ny tenin'i Medvedev ireo mpiasan'ny Alfa-Bank. (tsaho iray tety anaty aterineto avy eo no nilaza fa nosoloin'ny Alfa-Bank tamin'ny tenin'i Medvedev ireo soratra asehon'ny milina mpizara volany.)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/15/86199/
 dia nandroaka: https://tjournal.ru/29367-tele2-ispolzoval-adresovannuu-krimskim-pensioneram-frazu-medvedeva-v-svoei-naruzhnoi-reklame